Musiyano uripo pakati peGNOME, MATE uye Kubatana | Linux Vakapindwa muropa
Uchaziva, kune akawanda mamiriro edesktop eGNU / Linux uye mamwe masisitimu anoshanda, mamwe emapurojekiti aya akonzera zvigadzirwa kana maforogo anotora hwaro hweimwe yemapurojekiti mahombe uye nekuigadzirisa kuti ive nemhedzisiro yakasiyana yekufunga kwehunhu hwehunhu kana hunhu hunodiwa nevanogadzira uye kuti ivo hazviigutse chirongwa chemubereki, sezvazvakaita muSolus Project, yekutangaOS, Kubatana, MATE, nezvimwe.
Izvi zvakasiyana siyana munyika yemahara dzimwe nguva zvinogona kutungamira mukusagadzikana pakati pevashandisi vekupedzisira. Kunyangwe ndichifunga kuti zvinonakidza kuva nedzimwe nzira dzakasarudzika dzakakodzera, ichokwadi kuti ini handioni nemaziso akanaka kuti kune dzimwe nzira dzakawanda kana maforogo emapurojekiti, zvichikonzera kuti vanogadzira vapararire uye vasatarise yavo kuedza pane chirongwa chimwe chete. Asi izvi hazvisi zvitsva, takatotaura mune ino blog kakawanda pane izvi yakakura uye panguva imwechete inofadza kupatsanurwa.
Zvakanaka, muchinyorwa chino ndichaedza, nenzira yakanakisa, kutsanangura kuti chii mutsauko pakati peGNOME, MATE uye Kubatana. Sezvaunoziva, GNOME inzvimbo inozivikanwa yedesktop, pamwe neKDE Plasma, chirongwa chikuru kwazvo munzvimbo ino. Asi nguva pfupi yadarika maforogo akadai seMATE akabuda, inova zvakare nzvimbo yedesktop inoenderana neGNOME 2 base kodhi yaive yakagadzirirwa kudzikisira kusagadzikana kwevashandisi neshanduro yeshanduro nyowani dzeGNOME
Y kune rimwe divi tine Kubatana, iyo isiri nzvimbo yedesktop, iri kunetsa, asi igirafu yakajeka inotsamira paGNOME. Kubatana sekuziva kwako kunogadzirwa neCanonical yeUbuntu, nekudaro ichitsiva izvo zvinokudziridzwa nevakagadziri veGNOME projekti kuti vape Ubuntu hwako musiyano unobata. Asi nepo MATE neGNOME vachigovana iyo GNOME Shell, Kubatana kunotsiva iri goko nerayo. Ndiwo ungave mutsauko mukurohwa kwakakura uye kutsanangurwa nenzira yakapusa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Musiyano uripo pakati peGNOME, MATE uye Kubatana
Ndakaedza zvese uye ndinoda kubatana zvirinani. Asi mune zvese gnome uye kubatana ini ndinoshandisa MacOS-maitiro doko. Unity launcher inoshanda kwazvo, asi sezvo ichingova kuruboshwe chete, iyo skrini haina symmetry. Nekudaro, dhoko riri pazasi pechidzitiro rinoshanda se "pasi" uye rinopa pfungwa yekuenzanisa. Yandinoda ndiyo yekuvhura yakavanzwa uye pandinoida ndinoimisikidza negonzo kana super kiyi. Doko riri pazasi pechiso. Iyo yakanaka kwazvo uye inoshanda nzira. Mhedzisiro yakawanikwa ne gnome yakafanana, asi iro repamusoro gnome hariratidze iwo majeti e psensor, dropbox, yangu-ekunze etc. Uye ine pani pazasi kuruboshwe yakashata kwazvo. Inoita kunge chigamba. Kana iwe ukawedzera iyo classicmenu-chiratidzo kune kubatana iwe une yekudonhedza-pasi menyu senge mu KDE kana Gnome. Wobva wagadzirisa Unity nemazvo unowana mhedzisiro inogutsa inovandudza gnome. Ne KDE iwe unogona kuita chimwe chinhu chakafanana, asi zvakaoma kwazvo kuita iyo yakakosha kiyi ishande uye ayo anovhura mafaera, tsamba dzevatengi nezvimwe, izvo zvinoshanda nekumira pane mamwe madhesiki. Zvakare KDE inorema uye yakashata,
Jorge Aguilera akadaro
Neniwo, mukushandisa ndinosarudza Kubatana zvirinani kubata nzvimbo yandinayo pane yangu Notebook skrini. Ndinoda kubatana. Ini ndinoishandisa kubvira 11.04
Pindura Jorge Aguilera
Chinyorwa chipi shit. Iwe hautsvage mukusiyana kwavo.
Ndakafunga zvakafanana xD
Pindura kuna eleazarbr
Zvinogona kunge zvisingatsanangurike, asi hongu, ndinoda kubatana, zvakare mukadzi akanaka kwazvo, gnome rave chimwe chinhu chakashata uye chisina kugadzikana pakuravira kwangu (kungofunga wega)
Iwe chidimbu chebenzi, hautsanangure chero chinhu
Pindura kune nassssss
Hapana chikonzero chekugumbura.
Nenzira, ini ndinoshandisa Mate.
Ko kushandisa imwe kana imwe yacho kunoshandura chimwe chinhu padanho rekuenderana kwesapplication kana ivo vanongo gadzirisa iyo desktop desktop? Ini ndinoshandisa Cinnamon, ini handidi chaizvo Kubatana uye Gnome Shell haina kuisa maoko angu pairi kwenguva yakareba, asi nguva yekupedzisira yakandipa murangariro uri nani pane Kubatana.
Ini ndinoda Apricity Os iyo yandinofunga inoshandisa Gnome, kana isu tikakwanisa kusarudza distro, Ubuntu semuenzaniso uye nekuisa chaizvo iyo desktop pairi zvingave zvakakwana, nekuti ini handidi Arch.
Zvakanaka, nehunhu uye kubatana, kana iwe ukaisa iyo kubatana-tweak-chishandiso chishandiso kuti uigadzirise, pamwe neclassmenu-chiratidzo, uye docky unogona kumisikidza kuti itaridzike seMac, Elementary Os, kana Apricity, asi zvakatonyanya kunaka. Zvinonzwisisika kushandura iyo desktop desktop kune yakakwira tsananguro mufananidzo.
Xavi Rubio akadaro
Mhoroi, kuyedza akasiyana desktops mazuva ano, ndadzosera Kubatana zvakare. Ini ndagadzirisa dambudziko replymouth, sezvo ini ndakaramba ndichiwana kubuntu imwe (kana paine munhu anofarira, ini ndinonyora maitiro andakaigadzirisa) asi pane zvimwe zvinhu zvakaramba zvine kde maitiro, senge firefox kana iyo damn icon ye mutauro unowoneka padhuze neiyo wachi kumusoro kwekurudyi, uko chiratidzo chekurambidza chinowoneka. Pane chero munhu anoziva kuzvigadzirisa? Ndatenda.
Pindura kuna Xavi Rubio
Ini ndinofunga kuti nekugadzira mafaira akavanzika kuti aoneke, ndiko kuti, avo vane zita rinotanga nenguva, dhairekitori rine zita .kde ichaonekwa mudhairekitori repamba. Iyo folda inobviswa uye ese kde marongero achanyangarika. Kune rimwe divi, nekuisa kubatana-tweak-chishandiso, Kubatana kunogona kugadziridzwa nekuchinja madingindira, mifananidzo, ichipa kujeka kune iyo pani, nezvimwe. Avo vanoti Kubatana kana gnome hazvigadziriswe imhaka yekuti havana kunetsekana kuti vazive sei.
Muchokwadi, ini handina kumbobvira ndafarira kana Kubatana kana Gnome, asi ndichivagadzirisa ne tweak uye nekuisa classicmenu nedoko, senge doko kana cairo-doko, ndinovapa iwo maitiro eE Elementary Os iMac, nevamwe vazhinji.
Sunungura chinyorwa. Izvo hazvitsanangure chero chinhu.
Chokwadi ndechekuti. Akanaka simbe. kutendeseka sekunge kaive kekutanga kuona izvi "zvinwiwa" nekuti isu tinotaura nezve izvi ndingadai ndakasanganisirawo "Cinnamon" (inova zvakare yakabva gnome3) iyo yakazvarwa pamberi pekurega kwegnome 2, uye kupfuudza iyo yekupedzisira kuti ive matte. Uye zvakanaka! Ini ndinowedzera chimwe chinhu kuchinyorwa.
Kwandiri iyo gnome 3.20 yakanyanya kunaka uye inobatsira ndinoishandisa muKali Linux uye inoita kunge inoputika!
Pindura kuna kahuna
Izvi zvinoita senge zvakajairika kurovedza muviri izvo zvavanokutumira iwe muSystem kirasi uye kuti iwe unoda kupedzisa munguva pfupi kuti uite iyo xD yekuronga maitiro. Yakapfupika uye haina kujekesa chero chinhu kwandiri.
Zvakanaka, uchizviona kubva kune yemusoro wevashandisi, kubatana kunononoka, kwakajeka, asi kunorema, zvirokwazvo nekuda kwehuwandu hwemhedzisiro kana uchivhura madiki maitiro uye kuti, genome mumaonero angu inoshandisa imwe yakasarudzika desktop desktop, senge gnome flash kumashure iyo ndiyo nharaunda yeyakajairika desktop, uye mudiwa, hazvo izvozvi ndiri kushandisa mate uye kubva pane zvandanga ndichikwanisa kuzviona hazvipindirane necompiz semuenzaniso, ine mamwe matambudziko nekubatana tweak maturusi, kunyange mate mate anoshanda zvakanaka asi haipe 100% yemabasa, ini ndaisa docky inonzi plank uye yepamusoro bar mune yakasarudzika dhizaini yakanaka kumashure uye yakagadzirira kuenda, zvikasadaro inoshandisa imwecheteyo apt-tora iyo munhu wese anoshandisa uye kana chimwe chinhu chisipo icho chiri yakaiswa seakakodzera kana vamwe ...
nekubatana kwehunhu ndakange ndisina matambudziko ekuchinja chitarisiko kuenda kune chema mac 100% nezvose zvayakakanganisa, asi nemumwe wangu ndinongova nedoko uye nebhawa ndisingachinje sezvo compiz isingashande uye ma icon haana kuiswa, ini ndine kuferefetwa asi kwete ini ndinoziva kuti nei isingashande, ndashandisa mandrake, redhat, centos, pakati pevamwe asi ubuntu ini ndinonzwa kuti ine rutsigiro rwakawanda zvisinei nebazi rehunhu ingave kubatana kana gnome kana mukwanyina, vanoshandisa murairo mumwe chete kodhi, kunze kwezvinhu zvidiki izvo zvandisati ndaziva kuti ndozvigadzirisa sei, ini ndinoshandisa yazvino vhezheni yemurume ikozvino iyo 17.10 ini ndinofunga uye bhuti kubva kune rekunze dhiraidhi dhiraivhiti kuti isakanganisa iyo fekitori windows inouya ne chirongo, chinondishamisa ..
Nezve kutsanangurwa kwegobvu rinongo girafu sezvo kernel inofanirwa kunge yakafanana pakati pe 3 ...
Pindura kune carlockk
Ini ndinoda Windows, kupusa kupedza nguva kusarudza kuti ndeapi mavara ekushandisa kune anoshanda system pane komputa yauri kuzoshandisa chete uye iwe chete wauri kuzoona. Kwete kuti chaive chinhu chakakosha zvakadaro. Ndeipi nzira yekutambisa hupenyu hwako !!